Shirka Maanta Oo Jimce Ah Ku Balansan Yihiin Maamulka Iyo Kooxaha Horyaalka Premier League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxaha Premier league iyo maamulkooda ayaa Maanta oo jimce ah geesaha isla gali doona waxayna si buuxda uga wada xaajoon doonaan sida ugu fiican ee lagu dhamaystiri karo xili ciyaareedka 2019/2020.
Ilaa horaantii bishii March waxa uu horyaalka Premier league ku jiray hakad kadib markii uu cudurka coronavirus sameeyay laakiin maanta waxaa la filayaa in uu soo bixi doono go’aan dhab ah oo xili ciyaareedka lagu dhamaystiri doono.
Waxaa la ogaaday sababta dhabta ah ee kooxaha Premier League ku qasbaysa in xili ciyaareedka la dhamaystiro June 30 iyada oo hadda ay inta ugu badan kooxuhu doonayaan in xili ciyaareedka la dhamaystiro.
Maanta oo jimce ah waxay 20 ka kooxood ee Premier League iyo maamulka horyaalka Premier League ay iskugu imanayaan shir kale oo muhiim ah waxaana looga xaajoon doonaa qaabka ugu fiican ee kulamada baaqiga ah lagu dhamaystirayo.
Kooxaha qaar waxaa u hadhsan 10 kulan halka kuwo kale ay kulamo ka yari u hadhsan yihiin, waxaana la filayaa in la qaadan doono qorshe ah in kulamada hadhay lagu dhamaystiro inta ka horaysa June 30, in garoomada oo madhan lagu ciyaari doono iyo waliba in ciyaartoyda oo dhan laga baadhi doono Coronavirus inta aan kulamada la bilaabin.
Laakiin sababta ugu wayn ee ay kooxaha Premier League ku doonayaan in xili ciyaareedka la dhamaystiro ka hor June 30 ayaa lagu qeexay in kooxo badani ay ka cabsi qabaan in haddii dhamaystirka xili ciyaareedku dhaafo June 30 ay ciyaartoyda qandaraasyadoodu dhacayaan ay iskaga dhaqaaqaan kooxahan.
Sida caadiga ah heshiisyada ciyaartoydu waxay dhacaan June 30, markaas oo uu si rasmi ah udhamaado xili ciyaareedka lagu jiraa, laakiin waxay kooxaha Premier League ka cabsi qanaan in ciyaartoy ay hadda kooxahoodu wax badan uga baahan yihiin ay si xor ah ku dhaqaaqi karaan haddii la soo gaadho July 1 markaas oo uu heshiiskoodu siinayo in ay kooxda ay doonaan ku biiri karaan.
Inkasta oo xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA uu soo jeediyay in heshiisyada ciyaartoyda sida xorta ah ku bixi karaa ay sii jiri karaan ilaa inta xili ciyaareedka la dhamaystirayo, haddana ma jirto cid xidigahan ku qasbi karta in ay kooxo ayna heshiisyo kula jirin u sii ciyaari karaan.
Sidaa daraadeed, kooxaha Premier League ayaa cadaalad daro u arka in xili ciyaareedka la dhamaystiro kadib June 30 maadaama oo ay ka cabsi qabaan in ciyaartoyda hadda kooxdooda jooga ee ay heshiisyadoodu dhacayaan ay bixi karaan oo ay xaalad adag wajihi karaan.
Tusaale ahaan Chelsea waxaa si xor ah kaga baxaya Willian kaasi oo haddii la gaadho June 30 xor noqon doona halka Tottenham ay waayi doonto adeega Jan Vertonghen haddii waqtigan la dhaafo waxaana jira koox kastaba ciyaartoy si xor ah kaga bixi karta inkasta oo ay kala saamayn badan yihiin.
Inkasta oo ay hadda kooxaha Premier League doonayaan in maanta si rasmi ah loo go’aamiyo waqtiga xili ciyaareedka lagu dhamaystiri karo, haddana wali waxaa jira dhawr kooxood oo aan ku deg degsanayn xaaladan.
Si kastaba ha ahaatee, waxayna insha Allah sugi doonaa shirka maantoo jimce ah ee maamulada kooxaha horyaalka Ingiriiska iyo maamulka Premier League kaas oo si dhab ah loogu falan qayn doono waqtiga iyo qaabka ugu haboon ee xili ciyaareedkan lagu dhamaystirayo.